Home News Khasaare ka dhashay gaari shacab oo ay rasaaseeyeen Ururka Al Shabaab
Khasaare ka dhashay gaari shacab oo ay rasaaseeyeen Ururka Al Shabaab
Mintidiinta Ururka Al Shabaab ayaa rasaas ku furay gaari ay saarnaayeen dad shacab ah oo marayay inta u dhaxeysa magaalada Mandhera Kenya iyo magaalada Ceel waaq Somaliya.
Raggan hubeysan ayaa gaarigan u galay War-guduud, gaariga la rasaaseeyay oo nuuciisa uu ahaa Toyota Land Cruiser ayaa waxaa ku dhaawacmay ku dhawaad Sideed qof oo rayid ah.
Wararka aan heleyno ayaa waxa ay sheegayaan in xaaladooda laga deyrinayo Saddex ka mid ah dadka ku dhaawacmay weerarka, halka dhawr qof oo kalana lagu dabiibayo Isbitaalka Ceel waaq.
Dadka saarnaa gaariga ayaan illaa iyo haatan la ogeyn tiradooda, maaddaama rakaabka qaarkii ay ka baxsadeen Rasaasta la huwiyay Baabuurka ay la socdeen.
Hay’adaha ammaanka dalka Kenya ayaa waxa ay sheegeen in ay wadaan baaritaano ku aadan kooxdii ka dambeysay weerarka gaariga lagu qaaday, waxayna weerarkaasi ku eedeeyeen Al Shabaab
Previous articleCiidan xoogan oo uu horkacayo Abaanduulihii xilka laga qaaday oo lagu arkay Sh/Hoose
Next articlePuntaland Oo Dib Ula Wareegtay Deeganka Af-urur
Maxeey tahay sababta Xisbiga Wadajir loogu diiday Siminaar uu ku qaban...
Gudigii uu magacaabay Wasiir Qarafaan oo ku wajahan Magaalada Dhuusamareeb.